Izingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika: ukusuka eSahara kuye eTeneré | Izindaba Zokuhamba
Izingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika
Luis Martinez | | Afrika, Iziqondiso
Iya ku izingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika Kuzocabanga ukuthi ungaba nomthamo omkhulu we-adventure, kepha futhi nokuzithola unamathafa amahle. Akumangalisi ukuthi ezinye zalezi zindawo, yize zilula, ziphakathi kwezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni.
Njengokungathi konke lokhu bekunganele, izingwadule zinohlobo lomlingo womoya. Ubulula bayo nobukhulu bayo kukusiza ukuthi ubone ukungadingeki kwezinto ezibonakalayo, zikusiza ukuthi ususe ukukhathazeka kwezwe futhi uxhumane nemvelo. Kepha, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizokukhombisa ezinye zezingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika.
1 Izingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika: Yini oyibonayo kuzo?
1.1 Ugwadule iSahara
1.2 Ugwadule lwaseKalahari
1.3 Ugwadule oludala lwaseNamib
1.4 IDanakil, enye yezingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika
1.5 ITenerife Desert, isandiso seSahara
Izingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika: Yini oyibonayo kuzo?
Kuwo wonke amazwekazi emhlabeni kunezingwadule ezibabazekayo. Kwanele ukuthi sisho, njengezibonelo, lokho kwe Atacama eNingizimu Melika (lapha sikushiya indatshana ekhuluma ngalelihlane), lokho kwe I-Gobi e-Asia noma kuleyo Amathaveni (Spain) eYurophu. Ngisho, uma kukhulunywa ngokuqinile, izindawo ezifana IGreenland zingamahlane angenasanti, kodwa iqhwa neqhwa.
Kepha kuzo zonke izindawo emhlabeni, mhlawumbe inani elikhulu kakhulu lezingwadule litholakala Afrika. Ngaphezu kwalokho, izandiso zazo ezihlukene zikhulu kangangokuba zithatha ingxenye enhle yobuso baleli zwekazi. Noma kunjalo, ukukukhombisa, into enhle kakhulu ukuthi sesivele sikutshela ngezingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika.
Ngamakhilomitha-skwele acishe abe yizigidi eziyisishiyagalolunye nesigamu, leli hlane esiseduze kakhulu kunalo lonke emhlabeni kunalezo ezishisayo (okwesithathu ngemuva I-Arctic futhi i I-Antarctica). Eqinisweni, kusuka ku ULwandle Olubomvu kuze kube I-Atlantic Ocean, ehlala iningi leNyakatho Afrika. Ngokuqondile eningizimu ifinyelela esifundeni se Sahel, esebenza njengoguquko oluya eSavana yaseSudan.
Njengoba ungacabanga, endaweni enkulu kangaka yomhlaba kuningi okufanele ubone. Ngakho-ke, sizokhuluma nawe kuphela ngezindawo ezithile ezinhle kakhulu eziphakathi kwezindawo ezinhle kakhulu zeSahara. Ngokufanayo, sizokwenzela kuphela labo abasendaweni yaseMorocco. Labo abaseningizimu ye-Algeria noma eLibya bangaba yingozi ngenxa yokungazinzi kwezepolitiki endaweni.
Sizoqala ngo- IMerzouga, idolobha elincane eliseningizimu-mpumalanga yeMorocco lapho ungabona khona ukushona kwelanga okungenakulibaleka. Kepha sizokhuluma naye ngaye, ngaphezu kwakho konke, ngoba uzosondela eduze kakhulu U-Erg Chebbi, enye yezingqimba zezindunduma ezimangalisa kakhulu kuyo yonke iSahara. Ezinye zazo zifinyelela kumamitha angama-200 ukuphakama futhi, ngamathoni awo awolintshi, zikunikeza umbono ongajwayelekile.
Akufanele futhi uphuthelwe isigodi se-draa, lapho uzothola khona ugwadule njengoba ubulokhu ucabanga njalo. Lokho kusho ukuthi, kunesihlabathi esikhulu futhi, ngezikhathi ezithile, i-oasis enezindawo zezihlahla zesundu.
Kodwa-ke, uma ukhetha uhlangothi oluhlalwa kakhulu lwe-colossus yase-Afrika, unokuvakashelwa okungenakugwenywa e-Ouarzazate, okwaziwa ngokuthi "umnyango wasogwadule" futhi futhi ngokuthi "iHollywood yeSahara." Lesi sibongo singenxa yokuthi amafilimu amaningi ashuthwe kule ndawo.
E-Ouarzazate kufanele ubone umxhwele kasbah ngu Taourirt, inqaba ye-adobe eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX ukuvikela umzila wegolide wakudala. Kepha kufanele futhi uvakashele imakethe yayo emaphakathi, egcwele indawo; isikwele se-Almouahidine kanye ne-souk yezandla.
Ekugcineni, cishe amamayela ayishumi nanhlanu ukusuka edolobheni elidlule, unenye kasbah ophethe isihloko seGugu Lomhlaba. Ifayela layo le- U-Ait ben haddou, inqaba enkulu ebiyelweyo yaseBerber esesimweni esihle kakhulu sokongiwa kwemvelo.
IKgalagadi Transfrontier Park
Namibia Ingelinye lamazwe ase-Afrika anezingwadule eziningi. Ngokuqondile, iKalahari ithatha ingxenye yobuso bayo, kepha futhi nemichilo ebanzi ye- Botswana y ENingizimu Afrika (lapha sikushiya i-athikili ekhuluma ngezwe lakamuva), ngoba inendawo ecishe ibe yisigidi samakhilomitha-skwele.
Isikhathi sokuqala lapho owezizwe ewela khona ngo-1849. Igama lakhe lizozwakala lijwayelekile kuwe, njengoba lalinjalo UDavid Livingstone, owathola iMpophoma iVictoria. Futhi, njengelukuluku, sizokutshela ukuthi «kgalagadi» kusho «ukoma okukhulu».
Kuleli gwadule elihle ungabona ifayela le- IChobe National Park, ebonakala ngobuningi bezindlovu, yize inezinyathi eziningi, izimvubu, izindlulamithi nezimpala. Kodwa-ke, ukuze ubone amabhubesi kufanele uye ku Isiqiwi SaseCentral Kalahari.
Futhi kugqame kuleli hlane i IKgalagadi Transfrontier Park, kepha, ngaphezu kwakho konke, i- IMakgadikgadi Salt Flats, aphakathi kwamakhulu amakhulu emhlabeni. Akhiwa ngenkathi ichibi elikhulu elinegama elifanayo loma, eminyakeni eyizinkulungwane edlule eyayihlala endaweni enkulu kuneSwitzerland. Abamukeleki kangangoba lokhu kube nomthelela ekugcinweni kwabo. Umuntu akakaze angenele kuzo.
Ugwadule oludala lwaseNamib
Dune Ogwadule LaseNamib
Phakathi kwezingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika, iNamib nayo ivelele ngeminyaka yayo, ngoba iyacatshangelwa endala emhlabeni. Eqinisweni, kukholakala ukuthi yayivele ikhona eminyakeni eyizigidi ezingama-65 edlule. Futhi lesi ngesinye sezizathu esenza kumenyezelwe ukuthi yiNdawo yamaGugu Omhlaba.
Njengoba kungenzeka uqagele kusuka egameni layo, iyatholakala naku- Namibia futhi inendawo engamakhilomitha-skwele ayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili. Uma uyivakashela, izihlabathi zayo ezibomvu zizodonsa ukunaka kwakho, kodwa futhi namanye amaphuzu ayo athakazelisa kakhulu.
Okokuqala, ngakolunye uhlangothi i ICape Croos, indawo yokuqala abeLungu abafika ngayo ngo-1486. ​​Njengamanje, iyikhaya lesiqiwu esikhulu kunazo zonke samabhere asolwandle kulo lonke elase-Afrika.
Eduze kwangaphambilini, nawe unedumela ISkeleton Coast, engenye yezindawo okungafinyeleleki kalula kuzona ezweni. Igama lalo linikezwe inani lezikebhe ezisenkingeni namathambo emikhomo endaweni.
Kepha mhlawumbe okukhanga kakhulu yi- INamib Naukluft Park, lapho ungabona khona izindunduma ezifika kumamitha angamakhulu amathathu ukuphakama. Ekugcineni, njengelukuluku, ekugcineni kwelinye ihlane laseNamib kunedolobha eliyizipoki lase I-Kolmanskop, idolobha elinezimayini elakhiwa ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX ngamaJalimane ukuze likhoselise abafuna idayimane.
IDanakil, enye yezingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika
Intaba-mlilo i-Erta Ale, ogwadule lwaseDanakil
Kutholakala engxenyeni eseningizimu ye- Eritrea nasenyakatho-ntshonalanga ye Ethiopia, ngokugcwele Uphondo lwase-Afrika, Leli hlane libhekwa njengenye yezindawo eziphansi futhi ezishisa kakhulu emhlabeni, ezinamazinga okushisa angaphezu kwama-degrees Celsius angamashumi amahlanu.
Inendawo ecishe ibe ngamakhilomitha-skwele ayizinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi amabili futhi ivelele izintaba-mlilo zayo, amaflethi amakhulu kasawoti namachibi akhiwe udaka. Phakathi kwabokuqala, i- UDabbahu, ngamamitha angu-1442 ukuphakama, kanye ne- U-Erta Ale, incane, kepha isasebenza.
Kodwa-ke, into enelukuluku lokwedlula yonke mayelana naleli hlane elingenakuhlala kahle ukuthi liyizwe lakubo Abantu base-Afar, iqembu lesizwe labelusi abayimizulane ababonakala ngemimese yabo emikhulu egobile nezinwele zabo ezinama-ringlet. Bakha izindlu zabo zesikhashana noma okuvukile ngamagatsha nezindwangu ezakha amadolobha abizwa izimbongolo.
ITenerife Desert, isandiso seSahara
Sishiye kuze kube sekugcineni enye yezingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika, empeleni, ezinwetshiwe zeSahara engxenyeni yayo eseningizimu. Kepha siyiphatha ngokuhlukile ngokuhluka kwayo okuningi. Eqinisweni, igama elithi "teneré" lisho "ugwadule" ngolimi lwesiTuareg.
Cishe ngamakhilomitha-skwele ayizinkulungwane ezingamakhulu amane, isuka entshonalanga ye Chad enyakatho-mpumalanga ye- I-Niger. Futhi, ngaphambi kokuqhubeka sikutshele ngaye, asikwazi ukumelana nokukutshela elinye ilukuluku lakhe. Kubekwe ucingo Isihlahla seTénéré, eyayiphethe ukuqashelwa okukodwa kokuba yedwa kunabo bonke emhlabeni, ngoba kwakuyiyona yodwa emakhilomitheni amaningi nxazonke. Ngo-1973, yadilizwa yiloli futhi, namuhla, isithombe esenziwe ngensimbi esikhumbulayo ukuthi sithatha indawo yaso.
Kepha iTénéré iphakathi kwezingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika ngenxa yezinye izizathu. Okokuqala, ngenxa yendawo enkulu nesihlabathi eyincithakalo eyakhekayo. Kepha futhi ngezinsalela eziningi zemivubukulo. Mhlawumbe eminyakeni eyizinkulungwane eziyishumi eyedlule isimo sezulu sayo sasihlukile ngoba kwakuhlalwa kuso.
Eqinisweni ku Tassili n'Ajjer, ithafa elisendaweni, lingenye yamasethi obuciko obubaluleke kakhulu edwaleni emhlabeni. Kutholakale amasampula angaphansi kwezinkulungwane eziyishumi nanhlanu zemidwebo nokuqoshwa kwenkathi yeNeolithic emele impilo namasiko abomdabu bakule ndawo. Zihambelana kakhulu ne- isiko kiffian.
Ngakolunye uhlangothi, endaweni ehambelana neNiger kukhona okumangalisayo izintaba zase-Ariri, imfumba enesimo sezulu saseSahelian eneziqongo ezifinyelela kumamitha ayi-1800 ukuphakama futhi ezinokwakheka okumangazayo kokuma komhlaba.
Futhi, phakathi kwalezi zintaba nogwadule uqobo, idolobha lase Agadez, inhlokodolobha yesinye sezici zesiko lamaTuareg. Ungalingeka ukuthi ucabange ukuthi leli dolobha elincane alinalutho ongakusiza ngalo. Akukho okunye okuvela eqinisweni. Isikhungo sayo esingumlando simenyezelwe Amagugu Emhlaba, umklomelo abelana ngawo nalo lonke ugwadule lwaseTenerife.
Empeleni, ngokomlando bekuyindawo yokuhamba yemizila eminingi yezohwebo. Nanamuhla ukuphuma kwalokhu okuholela Sabha, enye yemizila engenamusa kakhulu emhlabeni okuhamba kwayo kungatholakali kuwo wonke umuntu.
Ekuphetheni, sikukhombise ezinye zezingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika. Kepha singabala abanye abanjengo I-Lompoul, eSenegal, nezindunduma zesihlabathi saso esiwolintshi; lokho kwe I-Taru, eKenya, eduze neKilimanjaro, noma leyo ogaden, e-Ethiopia. Kodwa-ke, akuwona wonke angabizi ukuthi siwavakashele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Izingwadule ezinhle kakhulu e-Afrika